Kyimyindaing Branch operations will temporaliy be intergrated with Head Office - Capital Taiyo Life Insurance
၀၂၁ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့မှစပြီး ကြည့်မြင်တိုင်ရုံးခွဲ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား “အမှတ် ၇၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့” တွင်တည်ရှိသော ရုံးချုပ်နှင့် ယာယီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
ကြည့်မြင်တိုင်ရုံးခွဲအား ရုံးချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်သည့်အတွက် ကြည့်မြင်တိုင်ရုံးတွင် ထားရှိထားသည့် အာမခံစာချုပ်များ၏ စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အကာအကွယ်များ၊ အာမခံပရီမီယံများစသည်တို့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် လုံးဝပြောင်းလဲသွားမှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တူညီသော အရည်အသွေးဖြစ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆက်လက်ပေးစွမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Customers များအနေဖြင့် အသေးစိတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက အောက်ပါလိပ်စာများမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
We, Capital Taiyo Life Insurance Limited would like to annouce to all customers that Kyimyindaing Branch operations will temporarily be integrated with our Head Office which is located at No. 7, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar, from 12 April 2021.
We would also clearly notify that nothing is going to change on all customers’ terms and conditions of the insurance policies, such as benefits, protection amounts, premiums etc., and on the services which all customers have been provided due to this integration of Kyimyindaing Branch to our Head Office. We ensure you that we will continue to deliver the same quality services from the Head Office.
Please kindly reach out to the following contact address if you have any inquiry.